ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia06 AnkaraI-TCDD YHT Machinist yokuThenga
07 / 11 / 2019 06 Ankara, Ummandla waseMntla Anatolia, Imisebenzi, railway, JIKELELE, ITrove Train, ZOMHLATHI, ETURKEY
I-TCDD YHT iza kuqesha iMachinist- I-TCDD iya kwenza umsebenzi we262 Ukunikwa kwabasebenzi: Izikhundla zeTCDD ziye zavulwa kwaye ukuhanjiswa kwabasebenzi kubhengeziwe kwi5.Nov.2019. Kwisigqibo esapapashwa kwi-Gazette State Railways esemthethweni ayisebenzi 262 abasebenzi bafakiwe.
Isigqibo esapapashwa kwimagazini ekhoyo kwiGazethi yaseburhulumenteni imi ngolu hlobo lulandelayo; Kwimeko yamashishini aphantsi korhulumente kunye neenkxaso, ukuthengiselana okukhankanywe apha ngasentla kwenziwa ngaphakathi komda weSigqibo soMthetho esingu-399.
Ngesigqibo sika-Mongameli, ukurhoxiswa kunye nokulungiswa kwezikhundla zabasebenzi eziza kuqeshwa kwaye izikhundla zabasebenzi abanesivumelwano kunye nezikhundla kunye nezikhundla zabasebenzi abanesivumelwano phantsi komthetho zixhomekeke kuMthetho wabasebenzi baseburhulumenteni be657.
I-TCDD ECHASEKILEYO YABASEBENZI
Kwisibhengezo esipapashiweyo, i-TCDD, eyiCentral nePhondo, Ingcali eyiNtloko, uMhloli, uMcebisi, iGosa, uManejala weNkonzo, uManejala, Umcebisi oyiNtloko, uWagon Technologist, uNjingalwazi wezobuchwephesha, uYHT Mechanic kunye noochwephesha beengqondo.
Ithebhulethi yokuqeshwa kwabasebenzi kwi-TCDD
TCDD iziko Chief Expert 28
TCDD iziko umhloli 1
TCDD iziko lomcebisi 10
TCDD iziko igosa 26
TCDD yephondo Umphathi weNkonzo 3
TCDD yephondo umqondisi 15
TCDD yephondo Chief Expert 19
TCDD yephondo Wagon Technician 120
TCDD yephondo ezintanjeni Chief 18
TCDD yephondo Injineli ye-YHT 20
TCDD yephondo kwengqondo 2
Ukusekwa kuthetha ukwahlulwa kwabasebenzi. Abasebenzi abasabileyo baya kuqeshwa. Ulwazi malunga nokufunwa kwabantu abatsha kunye nokuqeshwa kwangaphakathi akuchazwanga kwaye isigqibo siphunyeziwe.
Ukwaziswa kwesigqibo sikaMongameli i-2019 / 373 epapashwe kwiphephandaba laseburhulumenteni nqakraza apha
Siza kuzama ukuphendula umbuzo ngubani umqhubi kunye nendlela yokuba ngumqhubi. Umqhubi ngumqhubi wamandla kagesi, idizili okanye izithuthi zomzila ezithwele abagibeli okanye imithwalo.
Ukunyusa amalungu omatshini we-locomotive kwaye athathe amanyathelo okhuseleko afanelekileyo, -Ugcina ingxelo emva kohambo igqityiwe kwaye ugcwalisa iincwadi ezifanelekileyo (incwadi yeziganeko, njl njl).
IZIXHOBO NEMIGAQO EYISEBENZISWA
Indawo yokuhlala (Steam, Diesel, Electric, Diesel-Electric), -Radiyo, -imodeli zokuhamba, ii-Screwdriver, iipliers, iiseti ze-wrench, izixhobo ezahlukeneyo, -Incwadi yencwadi (incwadi apho kuvela khona iingxaki).
IINKCUKACHA EZIFUNDWA NGOKUPHUMA
Abo bafuna ukuba ngoomatshini; -Ungasebenzisa iliso-kunye neenyawo ngokulungelelanisa, -Ukushukuma ngokukhawuleza, -Fumanisa izinto ezininzi ngexesha elithile, -Kunonophele, uxanduva, unetyala legazi, -Imibala eyahlukileyo, -Ukuqina kwimo yengqondo, -Konwabela ukujongana noomatshini kunye nezobuchwephesha bokusebenza.
UMSEBENZISELO WENKQUBO NEMIGAQO
Njengoko i-mechanics isebenza kwindawo yokuthutha izithuthi, kufuneka ihambe lonke ixesha. I-mechanics kufuneka isebenze imini nobusuku, ngeveki okanye ngexesha leeholide, kwaye rhoqo uhlale phantsi kwaye uholele i-locomotive. Ngokuqhelekileyo, banokubandakanyeka kwiingozi zokuqeqesha. Baqhagamshelana ne-dispatcher, i-chief treni, umqhubi kunye nomncedisi.
AMAZIKO EMSEBENZINI NEEMISEBENZI ZEMSEBENZI
Abaqeqeshi banokusebenza ngokubanzi kwiTurkey State Railways kunye neehoksi zinyuka, izitya zensimbi kunye neyinyithi, ukuthutha kweendlela zokuhamba ngomgizi wangaphakathi. Uluntu olwandayo luzisa ingxaki yokuthutha enkulu. Enye yezona ndlela zonyango kunye nekhuselekileyo zokuthutha ngokukhululeka ngumzila. Akunakutsholwa ukuba ukuthutha okanye ukuthutha abahamba ngomzila kwilizwe lethu kwinqanaba elifunwayo. Ekubeni ukuhamba kweendlela ezibaluleke kakhulu ekuphuhlisweni kwelizwe, kuyimfuneko yokwenza uhlaselo olubalulekileyo kule ntsimi kwelizwe lethu. Uphuhliso kunye nokuhlaziywa komzila wesitimela kubhekiselele kumsebenzi wamaqhinga amaninzi.
IZICWANGCISO ZEMFUNDO YEMFUNDO
Uqeqesho lobuchwephesha lubonelelwa kumaziko oqeqesho kwinkonzo ezinxulumene neCandelo loMlawuli oLoliwe weSizwe saseTurkey. Ukongeza, abafundi abaphumelele kwizikolo eziphakamileyo eziqeqeshwayo baqeqeshwa ngoqeqesho lwasemsebenzini.
INTSHAYELELO KWEMFUNDO YEMFUNDO
Ubuncinci abaphumelele kwizikolo zamabanga aphantsi bayadingeka kwimfundo yobugcisa. Ukongeza, kuyimfuneko ukufumana ingxelo yekomiti yesandi kwizibhedlele ze-TCDD.
UKUHLAWULWA KUNYE NOKUQULWA KWEMFUNDO
Ukuqeqeshwa kobugcisa bamacandelo kwiCandelo loLawulo loKhenketho lwaseTurkey; Inyanga ye-18 kwi-TCDD isikolo esiphakamileyo seSikolweni esiPhakamileyo, i-3 unyaka kwizikolo zemfundo yezikolo eziphakamileyo. Abagqweswa kwizikolo eziphakamileyo zezifundo, i-TCDD Jikelele yoLawulo lweeMveliso ezivulwe ngumcebisi ojongene nomatshini kunye nabaphumelelayo, ngokuthatha inxaxheba ekuqeqesheni inkonzo kunye neeklasi zinethuba lokuba ngumatshini. Kule nto, umsebenzi we-3 ngenyanga, kunye nomsebenzi wongcali we-internship kuze kube yilapho ilayisenisi yenziwe. Ekupheleni kwe-internship, ilayisenisi yokuqhuba inikwe abo baphumelele kwisivivinyo.
Abafundi abatsha abaphumelele kwi-TCDD yeZikolo eziPhezulu zeZikolo eziPhakamileyo kunye nabaphumeleleyo kwiSikolo soPhuhliso lweZikolo eziPhakamileyo, abavunywa ngokuvakalayo ngolu vavanyo, baqale umsebenzi wabo njengomncedisi womatshini. Emva kwexesha elithile lokuqeqeshwa kweenkonzo, bafumana isihloko somqhubi. Abo bafumana idiploma njengomakhweli bangaba ngumatshini ophezulu ngokuqhubeka nezifundo zabo.
I-SCHOLARSHIP, IMITHETHO NEMALI
Ngethuba loqeqesho lwentsebenzo olulungiswe nguMlawuli oyiNtloko weTurkey State Railways (i-TCDD), imivuzo yenyanga ukusuka kwinqanaba kunye nenqanaba elichazwe ngumThetho wabasebenzi bakarhulumente. I-657 inikezelwa ngabaphumelele kwizikolo eziphakamileyo zemfundo. Ukutyunjwa kwalabo baqeshwe njengama-machinist kwenziwa ngoluhlobo lwabasebenzi abasisigxina okanye abanesivumelwano. Abo baqeshwe njengabasebenzi basisigxina bafumana imivuzo yenyanga malunga namaxesha e-2 umvuzo osisiseko kunye nembuyekezo yabo ekhethekileyo. Abasebenzi abakontraki bafumana imivuzo yenyanga nganye ukusuka kwi-4 ukuya kwii-5 ngamaxesha omvuzo omncinci.
Ngubani oomatshini Indlela yokwenza umatshini
I-TCDD yezothutho iya kuzuza i-laboratory machinist
I-TCDD yothutho iya kwenza i-73 Machinist Reception!
Isibhengezo seNkcazo yabasebenzi be-TCDD
I-TCDD yothutho ikhubazekile, abagxothwa ngaphandle kunye nabasebenzi…
I-YHT yasinda kumatshini owenzakeleyo owenziwe ngethuba lokuqala
Ingozi yoQeqelelo kwi-YHT Line eBilecik, 2 Machinist…
I-TCDD ivula iNkqubo yokuQeqesha iMechanic
Umvuzo we-TCDD kaMachinist Uninzi lwe-2018
I-TCDD yeeNkonzo zokuThuthukiswa kweziThutho zeZiphumo
Isaziso sokuThengwa: DE 24000 Uhlobo lwe-Locomotive Engineer ı
Isaziso seThenda: 4 abasebenzi boomatshini eGulf kwi
Isaziso seThenda: 4 Abasebenzi baseMachinist eGulf in
Isaziso sokuThengwa: I-DE 24000 yohlobo lwendawo yokuhlala
Isaziso seTalente: Isilumkiso kuMatshini ukuya kwiNqanaba lokuwela inqanaba leGeç
Nasıl Makinist Olunur
I-TCDD iya kuqesha abasebenzi be262
ukuqeshwa kwabasebenzi be-tcdd
Abasebenzi beTCDD abaqeshwe
NgeProtocol phakathi koMasipala wase-Isparta kunye noMthwalo weTCDD weTrafti kwiSixeko uya kuncitshiswa
Izikhululo ezibini ezihlanganisiweyo e-İzmir Narlıdere Subway